အသိပညာမြင့်တင်ခြင်းနှင့် ပညာပေးခြင်း - Pan ka lay
So What!? ကမ်ပိန်း
၂၀၁၉ မတ်လ ၈ ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့တွင် ပန်းကလေးမှ နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်များ၊ သတင်းမီဒီယာများရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုနဲ့အတူ So What!? ကမ်ပိန်းကို စတင်မိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ရာသီလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို မြန်မာလူငယ်တွေ သိရှိနိုင်အောင်၊ အားပေးထောက်ပံ့မှုရရှိအောင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူသိအများဆုံးအွန်လိုင်း ပလတ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebookကိုအသုံးပြုပြီး တစ်ပါတ်ကို၂ရက် ပန်းကလေးက တင်ပေးနေပါတယ်။ Messenger ကနေလည်း အချိန်နဲ့တပြေးညီ ဖြေကြားပေးနေပါတယ်။
ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ အမျိုးသမီးအသိုင်းအဝိုင်းကိုသာမက သူတို့ကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့ အမျိုးသားများကိုပါ အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နိုင်အောင် ကူညီပေးဖို့၊ ပိုမိုကျန်းမာလာဖို့၊ ယုံကြည်မှုပိုရှိပြီး ကိုယ်ပိုင်အလားအလာတွေကို သဘောပေါက်နားလည်လာအောင် ကူညီပေးဖို့ ကျွန်မတို့တွေ သတင်းအချက်အလက်တွေပေးသလို စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ အားပေးမှုတွေလည်းပေးပါတယ်။
ကျမတို့ Facebook page ကို လူဦးရေစုစုပေါင်း ၂၇၀၀၀က follow လုပ်ထားပြီး messengerကနေ ဆက်သွယ်တဲ့ အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေ ၉၀၀လည်းရှိပါတယ်။ နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တွေ တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ ပညာရှင်တွေပါဝင်တဲ့ ကျမတို့ videoတွေကိုလည်း ကြည့်ရှုသူအရေအတွက် ၂သန်းကျော်ရှိပြီး ကျမတို့ကမ်ပိန်းအကြောင်းကို ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေမှာလည်း အကြိမ်၅၀ကျော်ကျော်လောက် ဖော်ပြခြင်းခံရပါတယ်။
လူငယ်လူရွယ်များကို ပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနဲ့ ရာသီလာခြင်းအကြောင်း ပညာပေးတဲ့ ရုပ်ပြကာတွန်းစာအုပ် ထုတ်ဖို့ Grant Challenges Canadaမှ “Stars in Global Health” grant ကို ပန်းကလေး ရခဲ့ပါတယ်။
စာဖတ်သူအကြိုက် ဒီဇိုင်းကို ဖန်တီးပြီး မြန်မာရုပ်ပြဆရာမအကူအညီနဲ့ ဗဟုသုတတိုးပွားစေမယ့်၊ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ တန်ဖိုးတွေ၊ မိန်းကလေးယောက်ျားလေးအချင်းချင်း နားလည်မှုတွေ မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ဖြစ်လာအောင် ဆန်းစစ်လေ့လာပြီး အစပျိုးဖန်းတီးနေပါတယ်။
ဒီရုပ်ပြစာအုပ်လေးထဲမှာ သူငယ်ချင်းအုပ်စုလေးတစ်စုရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကို ပြောပြရင်း မျိုးပွားခြင်းအကြောင်း၊ မိန်းကလေးယောက်ျားလေး ပျိုဖော်ဝင်ချိန် ပြောင်းလဲလာတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာတွေအကြောင်း၊ ရာသီစက်ဝန်းအကြောင်း၊ ရာသီလာချိန်သိထားသင့်တဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ သန့်ရှင်းရေးအကြောင်း၊ ရာသီလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အယူအဆအလွဲတွေ၊ လူမှုရေးစံနှုန်းတွေအကြောင်းပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်။
ရုပ်ပြစာအုပ်ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အားပေးထောက်ခံမှု၊ လမ်းညွှန်မှုတွေလည်း ရရှိထားပါတယ်။
အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများအတွက် ရုပ်ပြစာအုပ်ကို အခြေခံထားတဲ့ ပျိုဖော်ဝင်ပညာပေးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပညာပေးလမ်းညွှန်စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ကုလသမဂ္ဂရန်ပုံငွေအဖွဲ့မြန်မာနဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ပြီး ဖန်တီးနေပါတယ်။
အသက်၁၀နှစ်ကနေ ၁၄နှစ်အရွယ်တွေကို အခုလိုအရေးကြီးပြီး သတိထားပြောရတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုသင်ဖို့ အသက်အရွယ်နဲ့သင့်တော်ပြီး အပြန်အလှန်ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့် လိုအပ်ချက်တွေနဲ့လည်း ကိုက်ညီပါတယ်။